Ikwesisi Okpu Udo China Manufacturers & Suppliers & Factory
Ikwesisi Okpu Udo - onye na-emepụta ihe, ụlọ ọrụ, onye na-ebu si China
(Total 7 Ngwaahịa maka Ikwesisi Okpu Udo)
Nnukwu Mgbidi Ndozi Nrụgide Ọrụ
Nnukwu Mgbidi Ndozi Nrụgide Ọrụ Usoro nchịkwa ugboro ugboro, nke nwere ọnụnọ dị elu. A na-ejikarị ya eme ihe na-emepụta ihe oriri na-edozi ahụ na ngwá ọrụ ndị na-emepụta ihe ọkụkụ na ebe ndị ọzọ. Ngwá dị elu nke igwe na-acha nchara anụ ọkụ, mgbatị nke na-eme ka a ghara imebi ihe, adịghị mfe nchara, mara mma ma sie...
Okpukpo Ulo Okpukpo Ugbo Turbine
Okpukpo Ulo Okpukpo Ugbo Turbine Kedu ihe bụ njedebe nke ọnụ ụzọ dị elu? 1) Ogwe mmiri Alloy Alloy na ikiri windo maka akụrụngwa
Oghere Ulo Okpukpo Uhie
Ogwe Ụlọ Ahulu nke Turbine Ọfụma Nchebe Na-ahụ Maka Ngwá Agha Kedu ihe bụ njedebe nke ọnụ ụzọ dị elu?
Okpukpọ Akụrụngwa Epempe Ịgba Epempe akwụkwọ
Akpaaka Epempe Ịgba Epempe Ọnụ ụzọ a na-agbaghasị na-emekarị nke igwe anaghị acha. Ejiri nke a na-eme ihe dị n'elu ọnụ ụzọ ahụ, ọnụ ụzọ ahụ makwara mma n'ịdị na-edozi ya, ọ dị mma ma dị mma; na ogologo ogologo ụkwụ a na-ejide, nke na-eme ka ọhụụ na ahụ nwere akụkụ nwere ngwugwu. Ugbo ala eletriki elekere...
Okpukpọ Igwe Akara Akpanya Ugboro abụọ Onu oghere na akpaaka enwere ike iji ya mee ihe maka akwukwo akwukwo akwukwo ma obu ndi mmadu na-ewepu onu uzo. a pụkwara itinye ya n'ọrụ n'èzí ọnụ ụzọ iko. Na ntinye pụrụ iche nke 4.2 m nke ala ala na mkpuchi (ogologo ntụle 4.2m, nwere ike belata dịka mkpa nke ndị ahịa),...
Ikwesisi Okpu Udo Ikwesisi Udo Ikwasi Uzo Umu Okpu Uzo Ogwechi Mkpuchi Kwadoro Igwe nju oyi Photocell Oghere Mkpuchi Udo Inye akpukpo uzo PVC